Matin’ny Fisotroan-Drano? Miantraika hatraiza any aminao ny “haintany” ao São Paulo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Septambra 2015 5:31 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Italiano, 繁體中文, 简体中文, 日本語, English
Volume Vivo (“Hadiry Mahavelona”), andian-tsarimihetsika an'aterineto breziliana mahaleotena iray miresaka ny krizin-drano ao São Paulo, dia fanavatsavàna ny rafitra miafina ao amin'ny iray amin'ireo tanàna lehibe indrindra (sy tratran'ny fikorontanana indrindra) manerantany.
Taterin'ilay andian-tsarimihetsika an'aterineto ny endrika maro amin'ny krizin-drano mahazo an'i São Paulo mihoatra ny herintaona izao [mg] nefa mbola tsy hita manarangarana akory izay mety ho fiafarany. Hatramin'ny politika ambadiky ny fitantanana ny ranon'i São Paulo ka hatrany amin'ny famitaha-mason'ny rano heverina ho harena tsy mety ritra, asehon'ny sarimihetsika ny sary iray manontolon'ny toe-draharaha mafy dia mafy mihatra amin'ny tanàna, manasongadina rakitahiry maro dia maro, sy antsafa ifanaovana amin'ny manampahaizana manokana, olompirenena, ary tantsaha tratran'ny voina.
Ny lohatenin'ny fampisehoana moa dia lalaontenin'ny “Hadiry Mahafaty,” izay vao nianaran'ny ankamaroan'ny mponina ao São Paulo tamin'ny herintaona. Ny antsoina hoe tahiry “maty [mahafaty]” dia hita amin'ny rano izay miandrona any amin'ny fanambanin'ny farihy. Tsy mahasalama io karazan-drano io raha sotroina. Ny Sabesp, orinasam-pikarakarana fototra izay mitantana ny fanomezan-dranon'i São Paulo, dia efa nanangona ny rano tamin'ireo tahiry ireo rehefa nanomboka niharitra ny tahirin-drano nataon'olombelona.
Ny rafitra Cantareira, izay manome rano ny atsasaky ny tanànan'i São Paulo, dia efa miasa ambanin'ny tokonana kely indrindra ilaina hatramin'ny 2014. Saripika: Demotix
Araka ny tranonkala ofisialin'ny Volume Vivo, “ny krizy no fotoana mety hampieritreretana ny fampiasana ireo otrika ilaina amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ao amin'ny faritra be mponina indrindra ao Brezila.”
Fanohanana avy amin'ny fitia tsy mba hetra avokoa no nahafahana nanatontosa ity andia-tantaramitohy notontosain'ilay tanora Breziliana mpamokatra sarimihetsika antsoina hoe Caio Silva Ferraz ity. Tamin'ny 2009 izy no namokatra fanadihadiana nahazo dera antsoina hoe Entre Rios (“Anelanelan'ny renirano”), izay milaza ny fanitaran-tanànan'i São Paulo sy ny fiovan'ny fifandraisany amin'ireo renirano manodidina azy.
Fizarana roa no nivoaka hatreto. Ny voalohany, nomena anarana “Ny Fandavana ny Krizy,” no miresaka ny tsy niraharahian'ny fiadidiam-panjakan'i São Paulo ny hamafin'ny krizy tamin'ny 2014, isorohana ny mety ho fikorontanana ara-politika mialoha ny fifidianana.
Ny fizarana faharoa, “Ny Rano ao Anatiny,” dia mampiseho ny fanjohin-kevitra hafahafa amin'ny tetipanorom-pitantanana izay manangon-drano any amin'ny toerana lavitra, nefa mandoto ny renirano manondraka ny tanàna.
Hatramin'izao moa dia ny fizarana voalohany ihany no misy dikantsoratra amin'ny teny anglisy.